ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse |
Home Afaan Oromoo ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse
ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse
“ODPn paartii Badhaadhinaatti makamuuf murteesse.”
Sadaasa 27, 2019
Kana jechuun paartii EPRDF jedhamutu baqe osoo hintaane paartii haaraatu hundeeffame.
Gaaffiin itti aanu:
Paartiin aangoorratti moggaafamee barcuma mootummaa qabate EPRDF erga akka tasaa dhabamee aangoo mootummaa bulchuuf eenyutu bakka buufama?
PB sechi boordii filannootti of galmeessuuf dirqama. Yeroo kanatti qaawwaa aangoo (Power Vacuum) eenyutu cufa?
Yakka namoomaa, diimokiraasii fi biyyaa EPRDF waggoota darban qaqqabsiise eenyutu itti gaafatama?
Hireen qabsoo waggoota heddu itti dadhabamee maal ta’uuf deema? Cabiinsa seeraa, labsiwwan fi kanneen biroo sechi mul’achuuf deemu eenyutu tiksa?
Waraanni, qaamonni dippiloomaasii fi ejentoonni EPRDF bakka buufate akkam ta’u?
via Lammii Beenyaa
#Breaking! Abiy #Diina U/Oromooti!
#Dr_Abiyyiin yakka seenaa guddaa haamilee uummata Oromoo cabsu raawwate!
Kaleessaa fi har’a walgayiin koree giddu galeessa ODP Adaamatti dhimma #Paartii_baqsuurratti taa’amaa jira. Walgayii kanarratti itti aanan paartichaa Ob. Lammaa Magarsaa hin argamne. Bakka Lammaan hin argamnee fi hooggantoonni fi miseensonni paartichaa olaanon hinjirretti, warri jiranis mormaa jiranitti Dr Abiyyiin humnaan yaada kana akka fudhatan godhaa jira. Kanarra darbeemmoo wanti hedduu nama aarsuu fi seenaa fi seexaa uummata oromoo cabsu walgayichi #Adaamatti afaan #Amaaratiin adeemsifamaa jiraachuu isaati. Kanaan walqabatees Dr Abiyyii mormii guddaan qunnameera. Dr Abiyyiis hedduu aarun arrabsoo haamilee uummata Oromoo cabsuu fi paarticha hin madaalle akka fayyadame dubbatamaa jira. Marii kanaanis Dr Abiyyiin hayyootaa fi beektota Oromoo hedduu paartilee isaanii waliin akka arrabsee fi tuffii qabu muul’ise hirmaattootni marichaa eeraniiru. Kaleessa #ADP fi #Habashoonni DC jiran Oromoorratti waraana banuuf sochiitti akka jirann “Qeerroon Shororkeessaa jedhamee farrajamuu qaba!”jechuun kan yaadatamudha. Dr Abiyyi jara achitti ergee ofii ammoo asitti cufatee Afaan alagaatin nu gabroomsuf sochiitti jira.
Amma wanti hundinuu ifadha. Kaayyon Namichichaa Oromoo fi Oromiyaa diigudha. Kuni uummata Oromootif salphinaa fi qaanii guddaadha. Oromoo wareegama barbaachisii of kabachiisi maaloo! Maaloo hooggantoonni Oromoo ergq gaafa akkanaa calliftanii yoom dubbattu? maaloo saba keessan Oromoo fi biyya keessan Oromiyaaf birmadhaa.
◈#Source:- #OMN fi hirmaattota marichaa!
Previous articleTen steps used by Abiy Ahmed to destroy EPRDF and Ethiopian federalism
Next articleAjaja WBO zonii lixaa Jaal Marroo Dirribaa Oromoon hidhannoo jabeeffachuun kaayyoo bilisummaa milkesa!
Gaaffii fi Deebii Jaal Marroo fi RABO Amajjii 09, 2021
Micciir Dafaa November 27, 2019 At 7:23 pm
Lammaan afaan dammaa hojiin summii uummata Oromoo walgahii dhaabs maxxannee OPDO irraa hafuun tooftaadha malee mormii miti. Akka dhaabi EPPn hundeeffamu koree EPRDF isa agoobara tahe keysatti ‘haa baquu’ jedhee deggeree filee jira. Kanaaf, walgahii kanarraa hafuun tooftaan olola oofuufidha. Abiyyis bara darbe yeroo Labsiin Yeroo Muddamaa(command post) labsamuuf jedhe walgahii parlamaa irraa haxxummaan hafe. Jarri shira TPLF jalatti barte dalagaa jirti.
OMN fi Jawaar Mohammadis ammoo rakkoo Oromoon ammaan tana teeysa jirtuuf shoora olanaa gumaachaniiru. Jaratu OPDO hanganaan gahee, nafaxanyasn OPDO jala gugattee akka du’aa kaatu tolchani. Ammas nami Jawaar jedhamu seer-dhablummaa fi olaantummaa nama qeenxeef abbaa irrummaa baabsaa jira. Kaayoo, dagalee dhabaaf caasaa takka osoo hin qabaanne Oromoo akkuma habashaan jette san “mangaa” tolchuuf deemaa jira. Oromoon yeroon dammaquu qaba.
Leave a Reply to Micciir Dafaa Cancel reply